Mogadishu Journal » Ciidamada dowladda oo gacanta ku dhigay koox burcad ah magaalada Muqdisho
Mjournal :-Taliska Ciidanka Booliska Sopomaaliya ayaa waxaa ay faah faahn ka bixiyeen howlgal Ciidamada Booliska ay ka sameeyeen degmada Howl-wadag,kaas oo lagu soo qabtay Koox Burcad ah.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Zakiye Xuseen ayaa sheegay in Ciidamada ay gacanta ku dhigeen laba Nin oo Burcad ah,kuwaas oo dhac ka geysanayay Gudaha Suuqa Bakaaraha.
“Ciidamada Boliiska degmada Howlwadaag ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan labo burcad oo hubaysan oo bulshada ku dhacaayay suuqa Bakaaro. Waxaan shacabka degmada ugu mahad celineenaa gacan siinta soo qabashada burcadka ayay tiri Zakiya Xuseen.
Maalma ka hor ayay aheyd markii Gudaha degmada Xamarweyne ee Gobolkan Banaadir ay isku-rasaaseeyeen Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya koox burcad ah,wallow markii dambe saddex ka mid ah la qabtay.